In kabadan 20% Fursadaha Boggeenna Guriga ah waxay ka yimaadaan Hal Muuqaal | Martech Zone
Waxaan iska qornay Hotjar waxna waan sameynay baaritaanka kuleylka boggayaga hore. Waa bog deg deg ah oo dhameystiran oo leh qaybo badan, xubno, iyo macluumaad. Hadafkeenu maahan inaan dadka jahwareerino - waa inaan bixino bog abaabulan oo martidu ka heli karto wax kastoo ay raadinayaan.
Laakiin ma helayaan!
Sideen ku ogaan karnaa? In kabadan 20% kaqeybqaadashada dhammaan boggaga gurigeenna waxay ka timaaddaa annaga raadinta. Markaan dib u eegeyno inta hartay ee boggeena, booqdayaashu marar dhif ah ayey isweydaarsadaan oo wax badan ayey isdhaafsadaan boggayaga. Waxa ka reeban ayaa ah in dad badan oo soo booqda ay aadaan cagteena.
Waan hirgelinay Swiftype adeegayada baaritaanka gudaha. Waxay bixisaa aalad autosuggest adag, warbixin weyn, waxaanan leenahay halbeegyo badan oo dheeri ah oo aan ku hirgelin karno goobta.
Iyadoo aan loo eegin sida ugu wanaagsan ee bartaada loo dejiyey, sida socodkaagu u abaabulan yahay, booqdayaashu waxay rabaan inay kantaroolaan khibradooda u gaarka ah waxayna rabaan farsamo raadin gudaha ah si ay u helaan waxa aan u baahanahay. Maaddaama aan la shaqeyneyno shirkadaha si joogto ah wax u daabaca, helitaanka qaab raadin adag oo dareen leh waa waajib. Haddii aadan isticmaalin a raadiso adeeg ahaan qalab, hubi inaad hirgeliso raadinta gudaha ee falanqayntaada. Waqti ka dib, waxaad sidoo kale ku qaban doontaa qaar ka mid ah macluumaadka cajiibka ah mowduucyada booqdayaashaadu ay raadinayaan oo aanad soo saarin waxyaabaha ku jira.
Tags: guji falanqayntakhariidadaboggaqaabeynta bogga gurigahotjarraadinta gudaharaadiso adeeg ahaanSuuq Goobidisbadal
Gawaarida Dukaameysiga Suuqa ee Suuqa ayaa si xushmad leh u soo jiidaneysa
Taasi waa run. Loogu talagalay naqshadeeye iyada ayaa ka wanaagsan in la muujiyo sida xiisaha badan ee soo jiidashada macaamiisha xiriiriyeyaasha sida ugu macquulsan. Had iyo jeer macmiilku ma riixaan qaybta "ugu fiican-shirkadda" ee bogga internetka.